12:32:00 am Ko Ye -Tech No comments
ဝင်းဒိုး ၁၀ အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် အက်တီဗေတာပါ.....
R Click >Run As ဖြင့် Run ပါ ....
~Activate Windows 10 ကိုကလစ်ပါ....
~အစိမ်းရောင်စာများဖြင့် activated ဟုပြလျှင်ရပါပြီ...
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း - 1.2 MBပဲရှိပါတယ်
Computer ထဲက Video တွေကို Facebook ပေါ်မှာ Live တင်နည်နှးင့်ဆော့ဝဲ
12:34:00 am Ko Ye -Tech No comments
Computer ထဲက Video တွေကို Facebook ပေါ်မှာ Live တင်နည်းလို အပ်တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးကိုအောက်တွင်ဒေါင်းယူပါ...လုပ်နည်းvideo လည်းတင်ပေးထားပါတယ်
Download link >> ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ
11:05:00 pm Ko Ye -Tech No comments
➡️ Frozen Keyboard Version 3.3 အလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Andriod9မှာပါ သုံးလို့ရနေပြီနော် 📣
➡️ ကီးဘုတ်ကို အထာကျကျသုံးနိုင်ဖို့ အခု Update မှာ Frozen Theme Store ကို ပါ ထည့်ပေးထားပါ တယ်
➡️ Frozen Store ဆိုတာကတော့ မိမိစိတ်ကြိုက် နောက်ခံတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ဖို့ HD Theme ( အကြည်တွေ ) ကို တစ်နေရာထည်းမှာ ဆုစည်းပေးထားတဲ့ အလန်းစားတင်ဆက်မှုအနုပညာတစ်ခုပါ 😍
➡️ အဲ့ဒီ့လို ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေနဲ့ အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါဝင်လာတဲ့ Version 3.3 ကို Frozen နဲ့အတူ ခံစားနိုင်စေဖို့ အောက်က Link မှာ အမြန်ဆုံးပဲ အခမဲ့ဒေါင်းယူလိုက်ပါ 👇
Apk Link -ဒီမှာဒေါင်းပါ
(13.11.2014)နေ့ထွက် Zapya Update Version
3:43:00 am Ko Ye -Tech No comments
ZAPYA ဆိုရင်လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ခုကတော့13.11.2018နေ့ထွက် အပ်ဒိပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါ တယ် အပ်ဒိပ်ဖြစ်တာမှကြိုက်သူများအောက်မှာဒေါင်းယူနိူင်ပါပြီ
Xaiomi phone များအတွက် google service တွေကိုထည့်သွင်းနိူင်မဲ့ Tool
3:10:00 am Ko Ye -Tech No comments
Xaiomi phone များအတွက် google service တွေကို
root မလိုပဲ အဆင်ပြေပြေထည့်သွင်းနိုင်မယ့် application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။installing ပြုလုပ်
နေချိန်တွင် internet line ဖွင့်ထားရန် လိုပါသည်။
3:33:00 am Ko Ye -Tech No comments
မြန်မာစာအဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ပါ ဇောဂ်ျီကနေ ယူနီကုတ်ပြောင်းမလား ယူနီကုတ်ကဇော်ဂျီပြောင်းချင်လား အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ အသုံးပြုလိုပါက အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းပါခင်ဗျာ
7:48:00 pm Ko Ye -Tech No comments
📁File size 18mb
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်ဆော့ဝဲ
7:39:00 pm Ko Ye -Tech No comments
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်ကို
ရေးသားထားသော App ဖြစ်ပါသည်။
Tweets by soemoe_s
☎Free Call Android☎ (1)
❀ Root Tools များစုစဉ်းမှု့ ❀ (2)
1 FIFA WORLD CUP (9)
1Mobile Market မှာApk Upload တင်နည်း (1)
2Step Verification (5)
3D Animation Maker (7)
Acer firmware(ဆိုင်ရာ) (2)
ACER ROOT လုပ်နည်းများ (5)
Adobe Illustrator စာအုပျ​မြား (1)
Adobe illustrator အသုံးပြုနည်း (2)
Adobe Patcher Software (4)
Adobe Product Softwares (5)
Adobe Software (13)
AIS Lava Iris 500 Firmware (1)
All Cracked Box Tools (2)
All Zip Code (1)
Alpha ZawGyi (1)
Andriod Video Editor (13)
Andriod Myanmar Font (17)
Andriod Root (19)
Andriod Root Cleaner (4)
Android app Tv Player (10)
Android Battery Apk (44)
Android Freecall (4)
Android 3G WiFi Connection Apk (4)
Android Adobe Reader (8)
Android Antivirus (38)
Android apk (14)
Android appl (218)
Android application (2267)
Android Application ရေးနည်း (1)
Android AppLock Apk (15)
Android Backup Apk (18)
Android Block Apk (2)
Android Browser (24)
Android Call Recorder (28)
Android Camera Apk (69)
Android Cleaner (1)
Android Cleaner Apk (46)
Android Converter (2)
Android Dictionary (10)
Android Download (29)
Android Error ဖြေရှင်းနည်းများ (4)
Android Facebook App (79)
Android File Manager App (4)
Android Firmware Backup Tools (2)
Android Firmware များစုစည်းမှု (62)
Android Fonts (7)
Android For Downloadmanager (20)
Android For Guiter Apk (4)
Android For Photpshop Apk (14)
Android For RAR (4)
Android For Themes (27)
Android For Video Editor Apk (23)
Android free call (3)
Android Game (747)
Android Game ပိုက်ဆံခိုးနည်း (9)
Android Games (182)
Android icoms (1)
Android Keyboard (10)
Android Launcher (213)
Android Live Wallpaper (151)
Android Lock Screen (15)
Android Messaging (3)
Android MobileTransfer (1)
Android Music Player (50)
Android New (3)
Android OfficeSuite (3)
Android Offine Maps (1)
Android Photo Editor (66)
Android Player (38)
Android Printer Apk (1)
Android RAR extras (3)
Android Reader (1)
Android Ringtone (3)
Android ROM Installer (1)
Android Root (7)
Android Root cleaner (1)
Android Root Tool (37)
Android Root လုပ်နည်း (16)
Android Software (159)
android software dead ဖုန်းများ (2)
Android Studio Apk (3)
Android Taskbar7Apk (1)
Android Theme (47)
Android to PC Software (11)
Android Tool (37)
Android TV apk (1)
Android Uninstaller App (6)
android usb debugging (2)
Android Usb Driver (4)
Android Video Recorder (4)
Android Volume (1)
Android Wallpaper & Ringtones များ (3)
Android Weather APK (1)
Android wifi (12)
Android WiFi နှင့်ပတ်သက်သမျှ (14)
android youthue (2)
android ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ (39)
Android ဖုန်းရဲ့ Setting ပြင်ဆင်ခြင်း (1)
Android ဖုန်းအသုံးပြု့နည်း (1)
Animated ပုံလေးတွေ (1)
Animations Software (8)
Antivirus keys (1)
APPLE နှင့်ဆိုင်သော (2)
Asus Root လုပ်နည်း (2)
Audio Editor (36)
Autoplay Software (7)
Backup and Restoreပြုလုပ်နည်း (4)
batch file programming (1)
Blog Music Player (2)
Blog Slider (8)
Blogger Button (5)
Blogger Comment (17)
Blogger Ebooks (1)
Blogger Hack (71)
Blogger Loading Style (6)
Blogger Mouse (1)
Blogger Template (44)
Blogger Tips (85)
Blogger Widget (152)
Blogs Html (64)
Blogs Post (91)
Blogs Tab Menu (53)
Bowser ဆိုင်ရာ (30)
Buddha မြန်မာစာတန်းထိုး (53)
Burning Software (34)
Burning Tools (51)
CD/DVD ဆိုင်ရာများ (32)
Clock Ccs Cod (1)
COC ဆိုင်ရာ (4)
code dynamic website with php (1)
Computer ဆိုင်ရာ (211)
Converter များ (30)
Copy Software (13)
Crack Patch Keygen (11)
Cutter / Joiner Software (2)
CWM Recovery များ (2)
CYDIA App ရေးသားနည်းများ (1)
Cydia Tweaks (29)
Desing Card (10)
Digital Life Journal (18)
Disk Dive Software (2)
Disk Labels & Covers Software (2)
dll error (1)
dota map (3)
Download Manager (46)
Download ဆိုင်ရာများ (75)
Driver Checker (11)
Driver Software (58)
Drivers Software (21)
Electric Hack (1)
Error ဖြေရှင်းနည်းများ (1)
Facebook v-192 (1)
File Lock Software (4)
Firefox Browser (8)
Firmware များ (52)
Flash song နှင့်ပတ်သက်သမျှ (1)
Folder Lock (18)
Fonts Download (3)
Fonts များစုစည်းမှု (6)
FootBall Live Link (2)
Free Download Manager (2)
Free PC to Android (1)
Frozen Keyboard Version 3.3 (1)
Game PC (33)
Game PS2 (1)
Google Chrome ဆိုင်ရာ (1)
Google Play Store Apk (1)
Google Play Store သွင်းရန် (1)
HDC Stock Rom All (1)
Hide Picture Apk (1)
How To Download (14)
Htc Root လုပ်နည်း (1)
HUAWEI FIRMWARE တင်နည်း (5)
Huawei P7 ROM (1)
Huawei Phone ဆိုင်ရာ (1)
HUAWEI ROOT လုပ်နည်း (1)
I Root Pc (1)
IMOBILE ROOT လုပ်နည်းများ (1)
Internet Download Manager (20)
internet download mananger (16)
Internet journals (44)
Internet speed up (8)
Internet ဗဟုသုတ (14)
Intervet Download Managar Tool (စတိုင်အမျိုးမျိုး) (1)
IOS Theme (3)
ios tools (5)
ios နည်းပညာ (5)
IOS မြန်မာစာသွင်းယူနည်း (1)
iOS နှင့်ပတ်သက်သမျှ (3)
IP ADRESS ဆိုင်ရာ (3)
IP Hide (13)
IP Hider Software (7)
Iphone Freecall (1)
iphone Game (3)
Iphone နှင့်ပတ်သက်သမျှ (6)
ISO BUNNER (1)
journal များ (14)
Kaspersky Key (7)
Kaspersky Daily Keys (2)
Kaspersky License key (11)
Keyboard Software (2)
Keygen and Patch (1)
Lenovo firmware (ဆိုင်ရာ) (6)
lenovo root (2)
LG All Model CWM (1)
LiveScore Apk (1)
Marquee Technique (14)
Media Player (37)
Media Player များ (16)
MI tta mm font (1)
Microsoft Office tool (9)
Mobile Driver (7)
Mobile Guide Journal (22)
Mobile Tutorial (4)
Movie Online (2)
Movie tutorials (8)
Mp3 Albums (5)
MP3 ဆိုငျရာ (1)
MTK Droid Tool (1)
Music Maker Apk (1)
My Pdf (29)
Myanmar Font (4)
MYANMAR MUSIC STORE (4)
NetGuide Journal (63)
Network Software (7)
Networking Tool (2)
New Blogs (15)
One Championship apk (1)
online နည်းပညာများ (10)
Oppo Firmware တင်နည်း (3)
OPPO ROOT လုပ်နည်း (3)
Partition Software (7)
paypal နှင့် ဆိုင်သော (5)
PC MP-3 Softwares (1)
PC Mp3 Software (1)
PC recovery (12)
PC Software (250)
PC Speed Up (32)
PC-Clean Software (75)
Pdf ဆိုင်ရာ (20)
Phishing ဆိုင်ရာ (1)
phone Spy apk (1)
Phone မြန်မာစာထည့်နည်း (4)
Photo Editor Software (77)
Photo Icon Maker Software (3)
PHOTO SHOP (သင်တန်း)သီးသန့် (44)
Photo Slideshow (12)
photoshop background အလန်းများ (6)
Photoshop Frame (3)
photoshop PNG ဖိုင်များရှာရန် (14)
Photoshop Software (42)
Photoshop ဆိ်ုင်ရာ (53)
Photoshop မှာသုံးနိုင်တဲ့ ATN ဖိုင် (2)
Photoshop အတွက် (ASL File) (5)
photoshop အတွက် Flares များ (3)
Photoshop အတွက် PAT FILE များ (5)
Plugin Software (4)
Premium Acount (20)
Printer Resetter (1)
Printer နှင့်ပတ်သက်သမျှ (5)
Product Key Finder Software (1)
Proxy List (3)
Recent Posts Widget (23)
Recover Apk (5)
Recover Software (51)
Ring Tone (3)
Root Tools (19)
Root Unistaller Apk (1)
Root လုပ်နည်းများ (44)
Samsung CDMA Flash File (1)
Samsung Galaxy Root ဖောက်ခြင်း (2)
Samsung Galaxy နှင့်ပတ်သက်သမျှ (2)
Samsung Phone firmware များ(ဆိုင်ရာ) (10)
Samsung Tool (2)
Scaner ဆော့ဝဲများ (3)
Screen Shot Apk (1)
Screen Shot Software (10)
Screen Video Recorder (39)
Sidebar Widget (70)
sim unlock လုပ်ချင်သူများအတွက် (1)
Simcard PUK Code (1)
Slideshow Movie Maker (7)
Snaptube apk (1)
Social Widget (19)
Software For Blogs (19)
Software install လုပ်နည်းများ (1)
Software များအသုံးပြုနည်း (2)
Sony Phoe ဆိုင်ရာများ (1)
Speed Up Internet (15)
Style text (1)
symbian phone နှင့် ဆိုင်သော (1)
TeamViewer Software (8)
Tech Space Journal (1)
Techspace Journal (4)
Trojan Killer (1)
Uninstaller Software (25)
Update tool Software (3)
USB Disk Security (9)
USB ဖြင့်ဝင်းဒိုးတင်နည်း (5)
USB နှင့်ပတ်သက်သမျှ (8)
Video Converter (36)
Video Editing (82)
Video Logo Remover (1)
Video Watermark Software (6)
Virus ဆိုင်ရာ (94)
Vroot Software (1)
Web Apk (2)
Web Design ရေးဆွဲနည်း (5)
Webcam Camera Software (13)
WEBCAM SOFTWARE များ (6)
Website Block Software (2)
Website ရေးနည်း (3)
Wifi ဆိုင်ရာ (36)
Window 8.1 (3)
Window Diver (4)
Window Media Player (6)
Window Stardock (1)
Window-10 ဆိုင်ရာ (3)
Window-7 ဆိုင်ရာ (35)
Window-xp ဆိုင်ရာ (3)
Windows 8 နှင့်ပတ်သက်သမျှ (3)
Windows Activator (22)
Windows Ios များ (3)
windows loader များ (10)
Windows Manager Software (25)
Windows Password Remover (4)
Windows Repair (4)
Windows Themes (24)
Windows တင်နည်း Movie (1)
Windows တင်နည်းများ (7)
Windows နည်းပညာဆိုင်ရာ (6)
Windows ပြသနာဖြေရှင်းနည်း (2)
Windows အခွေများ (32)
Windows7 နှင့်ပတ်သက်သမျှ (1)
WinRar Full Version (14)
WinToBootic နှင့် USB ထဲ Install လုပ်နည်း (8)
Xaiomi phone များအတွက် google service တွေကိုထည့်သွင်းနိူင်မဲ့Tool (1)
Xtouch Firmware (1)
Yangonthar Software Selection (1)
YouTube ဆိုငျရာ (1)
Zapya For Computer (1)
Zapya Update Version (1)
Zawgyi Wikipedia apk (1)
Zenfone Root လုပ်နည်း (1)
ကျွနုပ်နှင့် ပရဟိတအလှူ (10)
နည်းပညာ စာအုပ်များ (30)
ပရဟိတ လုပ်ငန်း (3)
မြန်မာ Online ငွေရှာဆိုဒ် (2)
မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် (7)
မြန်မာဖောင့် ပြသနာ (1)
ဝင်းဒိုး ၁၀ အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် အက်တီဗေတာ (1)
သင့်အီးမေးကို ထားခဲ့တာနဲ့ တင်သမျှ
USB Driver For All Mobiles Samsaung usb driver Sony Experia usb driver Lenovo usb driver Huawei usb driver Acer usb driver Asus usb driver LG usb driver Motorola usb driver Qmobile usb driverါ
Download For Firmware All Firmware For Lenovo Huawei အတွက် ROM များ Samsung CDMA Flash File Download HDC Stock Rom All Model Huawei ALL MTK SP FlashTools Firmware Coolpad Rom စုစည်းမူ Galaxy ph Firmware များစုစည်းမှု-1 OPPO Firmware မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Firmware & ROM ဆိုဒ်များ Need-Rom GSM-FORUM Huachen Technology မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
ဖုန်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ Android Firmware Backup လုပ်ယူနည်း Sony Ph ဆိုင်ရာများ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
ဖုန်းပညာရှင်ဆိုဒ်များ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Blogger အသစ်များလေ့လာရန် ဘလော့လုပ်နည်း ဘလော့လုပ်ပုံအပိုင်း(၁) ဘလော့လုပ်ပုံအပိုင်း(၂) ဘလော့လုပ်ပုံအပိုင်း(၃) ပို့စ်တင်နည်း မိမိဘလော့ပို့စ်မှာ ဓါတ်ပုံ မူဗီများးတင်နည်း
Blogger အသစ်များလေ့လာရန် မွေးနေ့အလှဆင် မီးပန်းဂီတသံစဉ်အပါဝင် ဘလော့ကာရဲ့ post by name ကိုပြောင်းနည်း Blog Template များ၏ width အား ချဲ့ခြင်း/ချုံ့ခြင်း ဘလော့ Template ကိုအလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်း Template ဒေါင်းယူပြီး xml ဖိုင်ရယူနည်း ဘလော့ Template အသစ်အစားထိုးနည်း Template ဒေါင်းယူပြီး xml ဖိုင်ရယူနည်း ဘလော့အတွက် နောက်ခံ ကာလာ/ ပုံ တွေထည့်နည်း မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
ဘလော့ပညာလေးများ-၁ Zawgyi နဲ့ Unicode ချိန်းတဲ့ ဘောက်လေး ဘလော့မှာ စာမျက်နှာလေးတွေထည့်နည်း Power by Blogger ဆိုတာကိုဖြုတ်နည်း တင်သမျှ Facebook တွင်အော်တိုရောက်နည်း ဘလော့မှာ မောက်ကာဆာကိုအလွယ် ထည့်နည်း ဘလော့ကို PASSWORD ခံထားကြမလား ဘလော့မှာ လင့်တွေ ကာလာရောင်စုံပေါ်စေခြင် ဘလော့မှာ You Might Also Like ပုံလေးတွေ ထည့်နည်း ZawGyi နှင်. Unicode Font များကို Embed လုပ်နည်း ဘလော့မှာ Error 400 တက်လာတာကို ဖြေရှင်းကြမယ် ဘလော့မှာနောက်ခံပုံထည့်နည်း
ဘလော့ပညာလေးများ-၂ ဘလော့မှာ မြန်ဆန်စေသောနည်း ဘလော့တစ်ခုရဲ့ အရေးပါသော Importblog-Exportblog သင့်၏ Blogger site တွင် Malware ရှိ/မရှိစစ်ဆေးနည်း Reported Attack Page အဖြစ် မိမိဆိုဒ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရလျှင် ဖြေရှင်းနည်း ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို Googleမှာရှာလို့ရအောင် လုပ်ချင်ရင် (Header)ပေါ်မှာ Add Page Elementထည့်နည်းလေးပါ ဘလော့မြန်မြန်လေးပွင့်စေရန်
ဘလော့ပညာလေးများ-၃ မှားဖျက်မိသော Post များ ပြန်ရှာနည်း မိမိတို့ ဘလော့မှာ labels ထည့်နည်း link ချိတ်နည်း ဘလော့မှာ ဧည့်ကောင်တာထည့်နည်း Zawgyi & Unocode ချိန်းတာလေးထည့်နည်း ဘလော့တစ်ခုရဲ့ Cbox လုပ်နည်း အစအဆုံး ဘလော့တွေအတွက် Cbox လုံခြုံရေးနည်းလေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
ဘလော့ပညာလေးများ-၄ မွေးနေ့အလှဆင် မီးပန်းဂီတသံစဉ်အပါဝင် မိမိဘလော့အတွက် Author ဖိတ်ခေါ်နည်း ဘလော့ Error များအတွက် ဖြေရှင်းနည်း Blog ကို Back up လုပ်ပြီး xml ဖိုင်လေးကို သိမ်းထားကြမယ် ဘလော့မှာ လိပ်စာဘားလေးက နာမည်ပြေးနေခြင်လား ဘလော့မှ fb like box လေးထည့်နည်းပါ ဘလော့အတွက် APK လုပ်နည်း
Facebook ဆိုင်ရာလေးများ-၁ Facebook ID Card ပြုလုပ်နည်း မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး Facebook Account ဖွင့်နည်း Facebook မှာ mp3 သီချင်းတင်နည်း Facebook Page များမှ Feed ယူနည်း Facebook မှာ Friend တွေ အများကြီးရအောင် လုပ်နည်း Facebook မှာ Video & Comment Photo တွေတင်မရတာဖြေရှင်းနည်း
Facebook ဆိုင်ရာလေးများ-၂ Facebook Chat မှာ Auto Reply ထားနည်း Facebook Like Page လုပ်နည်း Facebookမှာ တိုင်မယ်တောမယ် Report လုပ်မယ် facebook မှာမိမိအကောင့် ကို ပြန် hack ကျမယ် facebook ရဲ့ account setting အကြောင်းအပိုင်း ( ၁ ) facebook ရဲ့ account setting အကြောင်းအပိုင်း ( ၂ ) Facebook မှာ မိမိ သုံးတဲ့ password ကို ကြည့်မယ်
Facebook ဆိုင်ရာလေးများ-၃ မွေးနေ့အလှဆင် မီးပန်းဂီတသံစဉ်အပါဝင် Facebook မှာLiked ထားတဲ့ဟာတွေ ဖွက်ထားနည်း Facebook မှာ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းစာရင်းကို ဖွက်ထားမယ် Facebook အကောင့်ဖျက်နည်း Facebook ကို လုံခြုံရေးကောင်းအောင် facebook သုံးသူတွေ သိသင့် တဲ့ အချက် (၈) ချက် FB LIKE PAGE တွေမှာ Admin ဖိတ်ခေါ်နည်း Facebook Like Page တွေမှာ Name တွေ Link တွေ ချိန်းကြမယ်
ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးများဘလော့ခရီးသည်လယ်တီမြေသားစာပေနန်းတော်ထိပေအ်သျှင်မှအာဇာနည်များစွယ်စုံစာအုပ်စင်ရုပ်ရှင်မြို့တော် မိတ်ဆွေဘလော့ကာများ-၁ဆော့ဝဲလ်မြို့တော်ညီနေမင်း မိုး ( နည်းပညာ ) မိုးညိုသား(နည်းပညာ)၀င်းကမ္ဘာကျော်မောင်ပေါက်(နည်းပညာ)YGN BloggerKP3 Familyအိုင်တီခေတ်(ကိုလတ်)စိုင်းသူ(နည်းပညာ)aaaaအောင်လေး(နည်းပညာ-သတင်း)လွမ်းဦးမောင်MMitshareမောင် (စွယ်စုံကျမ်း)အမျိုးကောင်းသားအိုင်တီမုဆိုးလွင်မင်းဗိုလ်IT Sharing Networkမောင်လေ့လာအိုင်တီသားလေးမောင်ဝါသနာမောင်ဝေ( Free Movies Download) မရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါ မိတ်ဆွေဘလော့ကာများ-၂ဒီမိုးသား(သတင်း-နည်းပညာ)ထက်နေခအကြင်နာနန်းmrthangming(နည်းပညာ)Win Htut Tinလင်းကမ္ဘာဆေးရိုးသည်တန့်ဆည်သားလေးဗိုလ်လှိုင်း(ဆိတ်ဖြူသားလေး)အိုင်တီမီးသီးMDY Mobile Helperလမ်းပြကြယ်ပရဟိတအဖွဲ့သီဟဇော်(နည်းပညာ-သတင်း)ရွှေမန်းသားအာရှသားရဲ့နည်းပညာတော်ဝင်မင်းသားလေးနည်းပညာနှင့်ဘာသာရေးမျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်ဇေယျာ(နည်းပညာ)ဖြိုးလင်းခသန်းထိုက်ဇော်(နည်းပညာ)မြန်အောင်သားဟက်ကာလေးChin Mobil Groupငြိမ်းချမ်း(နည်းပညာ)Pathein ITမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါ စာအုပ်စာပေဆိုဒ်များသို့ဓမ္မနှင့်စာပေနန်းတော်မိုးညိုသား(စာအုပ်စဉ်)Myanmar IT Ebooksမောင်ထင်စာကြည့်တိုက်ဝိညဉ်သစ်စာကြည့်တိုက်ကျော်ကျော်ဦးစာပေKee Kee စာအုပ်ဆိုဒ်onlinepyadaikမမြန်မာစာအုပ်များစုစည်းမှုMyanmar Ebooksရွှေစကားစာပေလောက-၅မြန်မာစာအုပ်စဉ်မြန်မာစာအုပ်များ Onairmm စာအုပ်စင်မရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါမရှိသေးပါ
Blogs ဆိုင်ရာစာအုပ်များ ဘလော့ရေးသားနည်း Template အလွယ်ဆုံးပြင်နည်း Template ဒေါင်းယူနည်း နှင့် Template သွင်းနည်း LABELS ထညိ့နည်းနှင့် LINK ချိတ်နည်းအပြည့်အစုံ Blogger အတွက်သိစရာမျာ့း How To Do Web/Blogs Page Speed Faster? မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Computer မြန်ဆန်စေဖို့ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၁ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၂ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၃ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၄ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၅ computerမှာလုပ်ဆောင်စရာနည်း-၆ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Computer အခြေခံစာအုပ်များ လက်တော့အကြောင်းစုံစာအုပ် Laptopတစ်လုံးဝယ်မည်ဆို Laptopတစ်လုံးကိုလုံခြုံစိတ်ချအောင်အ ပြုနည်း Laptopကီးဘုတ်များပျက်စီးခြင်းကိုပြုပြ င်နည်းစာအုပ် Laptopတစ်လုံးပြုပြင်မည်ဆိုစာအုပ် Laptopရဲ့အားနည်းချက်များစာအုပ် ကွန်ပျူတာပြသာနာဖြေရှင်းနည်းစာအုပ် ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ်သိကောင်းစရာ Laptop_Hard_Driveပြောင်းလဲခြင်းနှင့် Memory_Upgradeပြုလုပ်ချင်း Laptop_Hardwareပိုင်းပျက်စီးခြင်းကို Externalဖြစ်ပြုပြင်ခြင်း မရှိသေးပါ
Windows ဆိုင်ရာစာအုပ်များ Window-7တင်နည်း Window-7တင်နည်း(usb ဖြင့်) Window Vista တင်နည်း Window-8 တင်နည်း Window အတုဖန်တီးချင်း Windows တင်နည်းအထွေထွေ Windows XP/7တင်နည်း မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Photoshop ဆိုင်ရာစာအုပ်များ CS4အသုံးပြုနည်းစာအုပ် Cs5အသုံးပြုနည်းစာအုပ် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်းစာအုပ် အိမ်ပုံရေးဆွဲနည်းစာအုပ် ပုံရိပ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံသာဘဝစာအုပ် Adobe Photoshop Tools များအကြောင်း Photoshop ခန်းစာများစာအုပ်-၁ Photoshop ခန်းစာများစာအုပ်-၂ Photoshop ခန်းစာများစာအုပ်-၃ မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
ရှိသင့်သောစာအုပ်လေးများ HTML+CSS ရေးနည်းအခြေခံစာအုပ် Virusရေးနည်းအကြောင်း virusရန်ကာကွယ်နည်းစာအုပ် wifiလွယ်လွယ်hackနည်းစားအုပ်+software how to hack fb eng ebook fbအကြောင်းအပြည့်အစုံစာအုပ်ကောင်း fbအကောင်ဖေါက်နည်းစာအုပ် fbအကောင့်လွယ်လွယ်ဖေါက် gmailတခုထဲနဲ့fbအကောင့်အများကြီးဖေါက်မယ် မရှိသေးပါ မရှိသေးပါ
Copyright © 2012 ဘလော့ခရီးသည် | မူပိုင် အောင်အောင်(မ.က.စ)